कांग्रेसका शीर्ष नेताले छान्न सकेनन् उम्मेदवार, केन्द्र र प्रदेशमा धकेलियो मनोनयन दर्ता :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म को कुन पदमा आकांक्षी?
सिटौला, देउवा र पौडेल। फाइल तस्बिर।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले केन्द्र र प्रदेश अधिवेशनका उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसक्दा अधिवेशन कार्यतालिका नै हेरफेर गर्नु परेको छ।
केन्द्रीय सभापतिदेखि पदाधिकारी टिम र प्रदेश सभापतिदेखि पदाधिकारी टिम टुंगो लगाउन नसक्दा अधिवेशन कार्यतालिका नै परिमार्जन गरिएको छ।
प्रदेश अधिवेशनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन यही मंसिर १५ गते गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सोमबार छलफल गरेर सातै प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका नै हेरफेर गरेका छन्।
प्रदेश अधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवार धेरै हुँदा छलफलका लागि समय चाहिएको भन्दै अधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर भएको छ। साथै केही जिल्लाहरूमा अधिवेशन नै बाँकी रहेकोले तयारी नपुगेको कारण देखाइएको छ।
यसअघि मंसिर १५ मा मनोनयन दर्ता, १६ गते उद्घाटन र १७ गते मतदान गर्ने गरी प्रदेश अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जारी गरेको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अब मंसिर १७ गते मात्रै प्रदेशमा उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्न पाउँछन्।
मंसिर १८ गते बिहान ८ बजेदेखि मतदान गर्ने भनिएको छ।
प्रदेश अधिवेशन कार्यतालिका दुई दिन पर धकेलिँदा त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पनि परेको छ।
यसअघि मंसिर २१ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ताको समय दिइएकोमा अब परिवर्तन भएको छ।
नयाँ कार्यतालिका हेर्नुस्:
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार मंसिर २४ गते मात्रै मतदाता नामावली प्रकाशन गरिन्छ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता २५ गतेलाई तोकिएको छ। कांग्रेसले यसअघि मंसिर २४ मा महाधिवेशन उद्घाटन र २५ गते सिधै मतदान गर्ने बताएको थियो।
तर अब मंसिर २७ गते बिहान ८ बजेबाट मतदान सुरू गर्ने गरी कार्यतालिकामा हेरफेर गरिएको हो। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट मंसिर २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरिएको थियो।
केन्द्रीय समितिले पारित गरेको अनुमोदनलाई सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहमन्त्री सिटौलाले बालुवाटारमा छलफल गरेर परिमार्जन गरिदिएका छन्।
केन्द्रीय सभापति पदमा सभापति शेरबहादुर देउवा नै यसपटक फेरि दोहोरिने इच्छा गरेका छन्। उनको समूहबाट उनी नै सभापतिका लागि तयारी गरिरहेका छन्। तर उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री को-को हुने भन्ने उक्त समूहले छलफल पनि गरेको छैन।
उपसभापतिमा अहिले नै उपसभापति रहेका विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्।
देउवालाई आकांक्षी धेरै हुँदा महामन्त्रीमा कसलाई उठाउने भन्ने चुनौति पनि छ। कांग्रेसमा दुई उपसभापति र दुई महामन्त्री तथा ८ सहमहामन्त्री पद रहने व्यवस्था छ।
महामन्त्रीमा अहिलेका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एनपी साउद र रमेश लेखक आकांक्षी छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि यही समूहबाट महामन्त्री लड्ने तयारीमा छन्। उनले महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरे पनि समूह खुलाएका छैनन्।
साथै उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सभापति पदमा उठ्ने तयारीमा छन्। उनले पनि प्यानलसहित उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्।
साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित उनी पक्षका चार नेता सभापतिमा उठ्ने तयारीमा छन्।
पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला सभापतिमा उठ्ने तयारी गरेका छन्। यी चार आकांक्षीबाट एक जना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार हुने बताइरहे पनि सहमति हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले यो समूहबाट एक जना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार हुने गरी छलफल अगाडि बढे पनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए।
सभापति को उठ्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा उपसभापति, महामन्त्री तथा आठ सहमहामन्त्री को-को उठ्ने भन्ने तय भएको छैन। यद्यपी पाण्डेले भने सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनी पनि यही समूहसँग नजिक छन्।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सभापति पदमा उठ्ने तयारीमा छन्। उनी २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा पनि सभापति पदमै उठेका थिए। तर पछि उनले देउवालाई सभापतिमा सघाएका थिए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। सभापतिका उम्मेदवार नै टुंगो लाग्न बाँकी रहेकोले उनले पनि कुन समूहबाट उठ्ने भन्ने खुलाएका छैनन्। पौडेल पूर्वमहामन्त्री सिटौलानिकट मानिन्छन्।
सभापतिको उम्मेदवार नै तय गर्न ढिलाइ हुँदा अन्य उम्मेदवारको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। उनी वरिष्ठ नेता पौडेल समूहसँग निकट छन् तर उम्मेदवारी दिनेबारे उनले सभापति देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए।
सभापतिको उम्मेदवार टुंगो लाग्न ढिलाइ भएपछि अर्का केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले पनि उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनी वरिष्ठ नेता पौडेलनिकट छन्।
प्रदेशका अधिवेशन सकेपछि मात्रै केन्द्रीय अधिवेशनका लागि उम्मेदवार तय गर्ने तयारीमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौला रहेको स्रोत बताउँछ।
यसैबीच प्रदेशमा सभापतिदेखि कार्यसमितिमा संस्थापन (देउवा) र संस्थापनइतर (पौडेल) पक्षबाट प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। देउवा र सिटौला पक्ष भने मिलेर उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
पौडेलले बागमती प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर सोमबार चाक्सीबारीमा प्रदेश सभापति कसलाई बनाउने भन्ने छलफल गरेका थिए। प्रदेश सभापति र कार्यसमितिमा रहनेहरू को-को उम्मेदवार बनाउने भन्ने छलफलमा नेताहरू केन्द्रित भएका छन्।
प्रदेश सभापतिमा कुन समूहबाट को आकांक्षी?
प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ। सभापति देउवा पक्षबाट मोरङका अमृत अर्याल र ओखलढुंगाका रामहरि खतिवडा सभापतिका आकांक्षी छन्।
साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट प्रदेश नम्बर १ को सभापतिमा केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे आकांक्षी छन्।
प्रदेश नम्बर १ मा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको पनि प्रभाव छ। उनीनिकट प्रदेश १ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राजीब कोइराला पनि प्रदेश सभापतिका आकांक्षी हुन्।
यस्तै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि प्रदेश १ मा प्रभाव छ। उनीनिकट रहेका सुधीरकुमार शिवाकोटी र उद्धव थापा पनि प्रदेश सभापति पदका आकांक्षी छन्।
सहमतिमा सभापति चयन हुने अवस्था देखिएको छैन। यसो हुँदा सभापति देउवा, पौडेल-कोइराला र सिटौला पक्षबाट एकेक गरी तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ।
प्रदेश नम्बर २ को अधिवेशन जनकपुरधाममा हुँदैछ। सभापति देउवा पक्षबाट अजय चौरासिया, कृष्ण यादव र महेन्द्र राय यादवको नाम प्रदेश सभापतिका लागि चर्चामा छ।
साथै उपसभापति विमलेन्द्र निधिनिकट रहेका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता, मन्त्री रामसरोज यादव सभापति पदमा उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
यहाँ पौडेल पक्षबाट रामकृष्ण यादव र अजय द्विवेदी प्रदेश सभापति पदका लागि आकांक्षी छन्।
बागमती प्रदेशको अधिवेशन हेटौंडामा हुँदैछ। प्रदेश सभापति पदका लागि देउवा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत र बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ आकांक्षी छन्।
साथै पौडेल पक्षबाट नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, धादिङ सभापति रमेश धमला र काठमाडौंका राजुराज जोशी सभापति पदका आकांक्षी छन्।
साथै बागमतीमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन पोखरामा हुनेछ। सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यद्वय गोविन्द भट्टराई र शंकर भण्डारी, अर्जुन जोशी र कुमार खड्का गण्डकी प्रदेश सभापति पदका आकांक्षी छन्।
पौडेल पक्षबाट भने सभापति पदमा रघुनाथ पौडेलले उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसकेका छन्। यहाँ शुक्रराज शर्मा पनि प्रदेश सभापतिका आकांक्षी छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन बुटवलमा हुनेछ। सभापति देउवा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल प्रदेश सभापतिका आकांक्षी छन्।
सांसद भरत शाह र केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठौर पनि प्रदेश सभापति पदका आकांक्षी छन्।
यहाँ पौडेल पक्षबाट रोल्पा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन सुर्खेतमा हुनेछ। सभापति देउवा पक्षबाट कर्णाली प्रदेश सभापति पदका लागि राजीवविक्रम शाह, कालीबहादुर सहकारी, ललितजंग शाहलगायत आकांक्षी छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी र तरूण दलका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाहीलगायतको नाम प्रदेश सभापतिका लागि चर्चामा छ। तर उनीहरू केन्द्रमै आउने जोडबलमा छन्।
यो प्रदेशको अधिवेशन धनगढीमा हुनेछ। सभापति देउवा पक्षबाट वीरबहादुर बलायर, नरनारायण शाह, गोविन्द शाह, बहादुर थापा, पृथ्वी सिंहलगायत नेताको नाम प्रदेश सभापतिमा चर्चामा छ।
साथै पौडेल पक्षबाट भने कर्णबहादुर मल्ल सभापतिका आकांक्षी छन्। डडेल्धुरा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका मल्ल सभापति देउवा पक्षले एकलौटी अधिवेशन गरेको विरोधमा सानेपामा अनसन बस्न आएका छन्। डडेल्धुरा अधिवेशन विवादमा परे पनि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले एक सदस्यको असहमतिबीच अधिवेशनलाई सदर गरिदिएको छ।
मल्ल महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छैनन्।
प्रदेश अधिवेशन समन्वय गर्ने जिम्मा ७ नेतालाई:
प्रदेश नम्बर १ मा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक तोकिएका छन्।
प्रदेश नम्बर २ मा रमेश रिजाल संयोजक छन् भने बागमतीमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोजक समिति बनेको छ। लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाणले प्रदेश अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन्।
कर्णालीमा जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा आयोजक समिति बनेको छ भने सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्रप्रसाद बडु प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति संयोजक छन्।
उनीहरूलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले प्रदेशको अधिवेशन गर्न अध्यक्षता गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १३, २०७८, २१:४६:००